Showing posts with label ကြီးပွားရေး. Show all posts
ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ share ထားပါ စေတနာဖြင့် ဇေယျာသူရ12:01:00 AM ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက...Read More
ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ share ထားပါ စေတနာဖြင့် Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 12:01:00 AM
2d ကလင်ဒါကြည့်ရန် ပေါက်စဉ် ဂဏန်းများ ကြည့်ရန်နိပ်ပါ အမှန် ဇေယျာသူရ1:15:00 AM
2d ကလင်ဒါကြည့်ရန် ပေါက်စဉ် ဂဏန်းများ ကြည့်ရန်နိပ်ပါ အမှန် Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 1:15:00 AM
ထီပေါက်စဉ်စောင့်ဝယ်နေစရာမလို ပဲ ( ၃၃၇) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ဖွင့်ချင်း ထီ တိုက်ရန် Share ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ
ဇေယျာသူရ6:19:00 PM သိန်း၁၅၀၀ သ-၃၁၈၈၄၉ သိန်း၁၀၀၀ဆုများ အ-၆၅၇၁၆၈ ခ-၅၂၂၅၃၉ သိန်း၅၀၀ဆုများ ကဈ-၂၅၆၂၂၉ ဍ-၆၈၆၅၈၉ က-၈၃၉၂၀၂...Read More
Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 6:19:00 PM
ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ share ထားပါ စေတနာဖြင့် ဇေယျာသူရ6:35:00 AM ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက...Read More
on 6:35:00 AM
2d ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ခနခန ပြောနေတာနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် shareထား မေ့မှာဆိုးလို့ ဇေယျာသူရ4:56:00 AM
2d ပေါက်ချင်တဲ့သူတွေ ခနခန ပြောနေတာနဲ့ တင်ပေးထားပါတယ် shareထား မေ့မှာဆိုးလို့ Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 4:56:00 AM
ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ share ထားပါ စေတနာဖြင့်
ဇေယျာသူရ11:03:00 PM * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု Live !!!!!!!!! * ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိ...Read More
on 11:03:00 PM
16-1-2017 အတွက် 3D အထူး မတွေ့ဘူးမဖြစ်ရလေအောင်Shareပေးလိုက်ကြပါအုံး တစ်ကွက်ကောင်းမှကြိုက်တယ်ဆိုသောမိတ်ဆွေများအတွက် ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ ဇေယျာသူရ5:23:00 PM 16-1-2017 အတွက် 3D အထူး မတွေ့ဘူးမဖြစ်ရလေအောင်Shareပေးလိုက်ကြပါအုံး တစ်ကွက်ကောင်းမှကြိုက်တယ်ဆိုသေ...Read More
16-1-2017 အတွက် 3D အထူး မတွေ့ဘူးမဖြစ်ရလေအောင်Shareပေးလိုက်ကြပါအုံး တစ်ကွက်ကောင်းမှကြိုက်တယ်ဆိုသောမိတ်ဆွေများအတွက် ပုံကိုနှိပ်လိုက်ပါ။ Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 5:23:00 PM
မင်္ဂလာပါ သူဌေးလောင်းတို့။ 2016 နှစ်ပိတ်ဂဏန်း 712 ဒဲ့အောင်သလို 2017 နှစ်ဦးဂဏန်း ဒဲ့အောင်ဖို့ ပေးပါမယ်။ ပေါက်ဖို့ကိုလည်း အထူးအာမခံပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အခမဲ့ ယူမယ်ဆို~~~ Like တစ်ချက်လုပ် Share လုပ်ပါ။ အားလုံးပေါက်ဖို့ လုပ်လိုက်ပါ။ ဇေယျာသူရ9:42:00 PM 2016 နှစ်ပိတ်ဂဏန်း 712 ဒဲ့အောင်သလို 2017 နှစ်ဦးဂဏန်း ဒဲ့အောင်ဖို့ ပေးပါမယ်။ အခမဲ့ပေးမှာပါ။ ပေါက...Read More
မင်္ဂလာပါ သူဌေးလောင်းတို့။ 2016 နှစ်ပိတ်ဂဏန်း 712 ဒဲ့အောင်သလို 2017 နှစ်ဦးဂဏန်း ဒဲ့အောင်ဖို့ ပေးပါမယ်။ ပေါက်ဖို့ကိုလည်း အထူးအာမခံပါတယ်။ မိတ်ဆွေများ အခမဲ့ ယူမယ်ဆို~~~ Like တစ်ချက်လုပ် Share လုပ်ပါ။ အားလုံးပေါက်ဖို့ လုပ်လိုက်ပါ။ Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 9:42:00 PM
ထီပေါက်စဉ်စောင့်ဝယ်နေစရာမလို ပဲ ( ၃၃၆ ) ကြိမ်မြောက်အောင်ဘာလေ ထီဖွင့်ဖွင့်ချင်း ထီ တိုက်ရန် Share ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပ
ဇေယျာသူရ5:06:00 PM ** ( ၃၃၆ ) ကြိမ်မြောက် အောင်ဘာလေသိန်းဆုဖွင့်ပွဲ သိန်း ၁၅၀၀ ဆု ဓ-၃၇၉၀၁၇ ( ၃၃၆ ) ကြိမ်မြောက် အောင်...Read More
on 5:06:00 PM
( ချဲဂဏန်း ) သုံးလုံးထီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ကြည့်ရန် Share ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ ဇေယျာသူရ11:31:00 PM ************************************************** ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု...Read More
( ချဲဂဏန်း ) သုံးလုံးထီတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ကြည့်ရန် Share ပြီးသိမ်းထားလိုက်ပါ Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 11:31:00 PM
ယနေ့ ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ( 16.12.2016 ) Live !!!!!!!!! share ထားနော် ถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 ဇေယျာသူရ11:11:00 PM
ယနေ့ ထိုင်း( ချဲ ) သုံးလုံးထီ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှု ( 16.12.2016 ) Live !!!!!!!!! share ထားနော် ถ่ายทอดสด การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวดประจำวันที่ 1 ธันวาคม 2559 Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 11:11:00 PM
ကျောင်းတက်ရင်း ဘဝကို ရပ်တည် လာမည့်ဒုက်ခကို ကလေးနဲ့မတန်အောင် ရင်ဆိုင်ရင်းဖြတ်ကျော်တဲ့ ကျောင်းသူလေး
ဇေယျာသူရ12:28:00 AM u Read More
on 12:28:00 AM
ဆရာဇင်ယောနီရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ဟောစတမ်း ဇေယျာသူရ7:48:00 PM
ဆရာဇင်ယောနီရဲ့ နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်မှ ၁၅ ရက်နေ့ထိ ဟောစတမ်း Reviewed by ဇေယျာသူရ
on 7:48:00 PM
လူကြည့်အများဆုံးဖြစ်နေတဲ့ ဆလိုက်မီးမောင်းတွေအောက်က ခက်ခဲလွန်းတဲ့ဟိုဒင်းဟိုဟာကားရိုက်ကွင်း
ဇေယျာသူရ2:51:00 AM အောက်တွင်နိပ်ရန် Read More
on 2:51:00 AM
ဇေယျာသူရ6:21:00 PM(၁)မျှော်လင့်ချက်သာရှိပါစေ ဘ၀ဆိုတာရှင်သန်လို့အကောင်းဆုံးအရာတွေပါပဲ။ (၂)သူပြုံးမှကိုယ်ပြုံးမဲ့အစား ကု...Read More
on 6:21:00 PM
အလုပ်မှာ ဘယ်လိုလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေကို ရှောင်သင့်လဲ ???
ဇေယျာသူရ6:13:00 PMအလုပ်တစ်ခုလုပ်ပြီဆိုမှတော့ ကိုယ့်အလုပ်ခွင်က အလုပ်ရှင်နဲ.ရော၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေနဲ.ရော အဆင်ပြေမှကောင...Read More
on 6:13:00 PM
အောင်မြင်ဖို့ လျှို့ဝှက်ချက်များ ၁
ဇေယျာသူရ5:57:00 PMလုပ်ငန်းခွင်မှာ အောင်မြင်ပြီး ဘ၀မှာ ပျော်ရွှင်ဖို့ဆိုတာ မတော်တဆ တိုက်ဆိုင်လို့ ရလာတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။ စ...Read More
on 5:57:00 PM
ရုံးမှာ နေ့ခင်းနေ့လယ် အိပ်ငိုက်ပြီဆိုရင်...
ဇေယျာသူရ5:38:00 PMနေ့ခင်းဘက်ရောက်တာနဲ့ နေ့လယ်စာစားတာများသွားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ညဘက်ကောင်းကောင်း မအိပ်ခဲ့ရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ေ...Read More
on 5:38:00 PM
သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာ အချိန်တွေထဲကနေ အချိန်ပိုလေး ထွက်လာအောင် လုပ်ဆောင်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်
ဇေယျာသူရ4:26:00 AMတစ်နေ့တာ လုပ်ဆောင်ရမယ့် လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေ ဘယ်လောက်များများ ကိုယ်ပိုင်အချိန်လေးကတော့ မရှိမဖြစ်ကို လိ...Read More
on 4:26:00 AM
လူငယ်တွေ အနေနဲ့ သိထားသင့်တဲ့ အချက် (၁၃)ချက်
ဇေယျာသူရ1:54:00 AM------------------------------------------------------------------------------------ လူလောကကြီးက အကု...Read More
on 1:54:00 AM
ကုန်ပါပြီ သင်ဇာဝင့်ကျော်ရယ် / ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
အိမ်ကမသိအောင် တိတ်တိတ်လေးခိုးရိုက်ပြီး Live လွှင့်ပြလိုက်တဲ့ ကျောင်းသူ
j ကာရာအိုကေခန်းထဲရောက်ရင် အတွဲတွေလုပ်တတ်တဲ့အကျင့် / ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
၀ါသနာတူရင် လာခဲ့ အကောင့်အပ်ပေးမယ် လာဆဲရင်ပြန်ဆဲမယ်ဆိုတဲ့ စွာတေးလန် Live ပြနေသူလေး
ကျောင်းသူလေးရွပြတဲ့ဗွီဒီယိုဖိုင် နာမည်ကြီးနေတယ် / ကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
်သေခါနီးရိပ်ခါယူနေတဲ့အဖိုးကြီး ချောင်းရိုက်နဲ့တိုးလို့ ဒေါခီးနေတာ / နှိပ်ကြည့်လိုက်
ယင်မနားတဲ့ လင်မယား ( ဟိန်းဝေယံ, သင်ဇာဝင့်ကျော် ) နိုင်ငံခြားရောက်နေတဲ့အေးမြတ်သူ တို့ဆေးမိပြီးအစားခံရတယ်ထင်နေတာ / ဗွီဒီယိုကြည့်ရန်နှိပ်ပါ
လဲ့ဆိုတဲ့မိန်းကလေး အကြောင်း နိပ်ကြည့်ရန် ******************* တစ်ထပ်တိုက်ကလေးအတွင်းမှာမူ အဖိုးတန်ပစ္စည်း အိမ်ထောင်ပရိဘောဂများ ဖြင့် သေသပ်ခန်းနားလှပါသည်။ အိမ်ထဲရောက်တော့ ဇော်မင်း...